Kooxaha bulshada rayidka oo caddeeyay mowqifkooda doorashada Soomaaliya – Kalfadhi
Guddiga Isutagga ururrada bulshada rayidka ee Soomaaliya iyo aqoonyahanno u ololeeya nabadda, xuquuqul insaanka iyo dimuqraadiyadda, ayaa waxay bayaan ay soo saareen ku baaqeen in heshiis laga gaaro qaabka ay u dhaceyso doorashada Somaaliya.
Guddigani oo ay ku mideysan yihiin ururada bulshada rayidka oo ka kala socda dhammaan maamul gobaleedyada iyo gobolka Banaadir, ayaa waxay bayaankooda ku sheegeen in muddooyiinkii ugu dambeeyay ay ku howlanaayeen xal u helidda khilaafka siyaasadeed ee hareereyey qabashada doorashooyinka la filaayo in ay dhacaan 2020/21.
Waxay sidoo kale soo dhaweeyeen shirka magaalada Dhuusamareeb uga socda madaxda dowoladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada.
Balse waxay dhaliileen inaan bulshada rayidka aan laga qeybgalin shirka wada tashiga ah ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe uga socda Dhuusmareeb.
“Bulshada rayidka ah waxa ay ka xunyihiin in madaxda Soomaaliyeed isku koobeen shirka isla markaasna laga xadidey xuquuda shacabka u leeyihiin in ay ogaadan xogta shirka, si ay talo ugu yeeshan,”ayaa lagu sheegay bayaanka guddiga isutagga ururrada bulshada rayidka.
Baaqaan ay soo saareen guddiga kooxaha bulshada rayidka ah ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay in ay kulan la qaateen madaxwaynaha dowlada fedaraalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada.
“Xubnaha Bulshada Rayidka waxa ay la wadaageyn mas’uuliyintaas dareenka shacabka iyo rajada laga qabo in mas’uuliyiinta ku heshiiyaan waxii dan u ah umadda soomaliyeed suurtagalna ka dhigi kara in ay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah,” ayaa lagu yiri warka ay soo saareen.
Waxaa sidoo kale kooxaha bulshada rayidka ay farta ku fiiqeen in caqabadaha ugu wayn ee shirka Dhuusamareeb haysta ay ka mid tahay is aaminaad la’aan ka dhex jirta madaxda.
“Bulshada Rayidka waxa ay shacabka soomaliyeed la wadaagayaan dareenkooda ah in shirka wadatshiga Dhusamareeb caqabadaha ugu weyn ee ku xeeran in ay yihiin is aaminaad la ‘aanta iyo in qof walba uu ku dhaganyahay aragtidiisa ku dhisan kooxaysi iyo tanaasul la’aan,,” ayaa lagu yiri bayaanka
Baaqa kooxaha bulshada rayidka.
Sida ku cad bayaanka ay soo saareen guddiga isutagga ururrada bulshada rayidka ee Soomaaliya waxay ugu baaqeen dhinacyada kala duwan ee bulshada in ay cadaadis ku saaraan madaxda ku shiraysa Dhuusamareeb in shirkaasi aan lagu soo kala tagin iyada oo aan heshiis la gaarin.
Waxay sidoo kale kooxaha bulshada rayidka ah ku baaqeen in madaxda ku shiraysa Dhuusamareeb looga baahan yahay in danahooda shaqsiga ay ka hormariyaan danta guud.
“In madaxda Soomaliyeed ee ku kulansan Dhusamareeb ay dantooda gaarka ah ka hormariyaan danta guud una tanaasulan shacabkooda isla markaasna ogaadan in talada lala leeyahay,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Baaqa kooxaha bulshada rayidka ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii u dambeeyay ay shirar ku lahaayeen magaalada Dhuusamareeb madaxwaynaha dowladda fedaraalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulahi Farmaajo iyo madaxwaynayaasha dowlad goboleedaya.
Shirkan ayaa waxaa lagu lafa gurayaa sidii xal loogu heli lahaa khilaafka ka taagan nooca doorasho ee dalka ka dhaci doonta iyo waqtiga la qabanayo doorashadaasi. BBC ayaa warbixintan horay loogu daabacay.